‘नमस्ते’ भन्दै सम्बोधन सुरु गरेका सीले के–के भने ? (पुर्णपाठ) | सुदुरपश्चिम खबर
‘नमस्ते’ भन्दै सम्बोधन सुरु गरेका सीले के–के भने ? (पुर्णपाठ)
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोल्टी होटलमा शनिबार आफ्नो सम्मानमा दिएको रात्रिभोजलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ ।
चिनियाँ भाषामा लेखिएको नमस्ते पढेको त्यति राम्रो सुनिएन, बुझिएन होला । त्यति राम्रो छैन होला । शरद ऋतुमा नेपालमा सयौं फूलहरू फुलेका छन् । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको हार्दिक निमन्त्रणामा म नेपालमा आएको छु ।
(नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्रपति सीले सोल्टी होटलमा आयोजित रात्रिभोजमा गरेको सम्बोधनको अनुवादित र सम्पादित अंश) अन्नपुर्ण पोष्टबाट